कर्णालीमा तीन मन्त्री र सचेतकको नाम, को को हुन ? - लाल बिहानी
कर्णालीमा तीन मन्त्री र सचेतकको नाम, को को हुन ?
in Banner News, प्रदेश
सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग सहमति भएसँगै माधवकुमार नेपाल समूहले तीन मन्त्री र संसदीय दलको सचेतक पदका लागि सांसदको नाम बुझाएको छ । शाहीलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलका नेताबाट हटाउन यमलाल कँडेलसहितका १८ सांसदले सं‌सदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह त्यसलाई रोक्न सहमत भए । सोही अनुसार सुर्खेतमा मंगलबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाही नेपाल समूहलाई तीन मन्त्री र स‌ंसदीय दलको सचेतक पद दिन तयार भएका छन् ।
दुई पक्षबीच सहमति जुटेपछि अविश्वासको प्रस्तावमाथि मंगलबार राखिएको छलफलमा नेता नेपाल समूहका सांसदहरु अनुपस्थित रहे । एक नेताका अनुसार नेपाल समूहका नेता समावेश गरी मन्त्रिपरिषद् पनि मंगलबार नै पुनर्गठन गर्ने सहमति भएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल समूहले मन्त्रीका लागि चन्द्र शाही, करवीर शाही र अम्मरबहादुर थापाको नाम बुझाएको छ । संसदीय दलको सचेतकमा कर्मराज शाहीको नाम पठाइएको स्रोतले जनाएको छ । चन्द्र शाहीलाई मन्त्री बनाउन माधव नेपाल समूहले एक वर्ष अगाडि नै नाम बुझाएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री नियुक्त गरेका थिएनन् । अब मन्त्रिपरिषदमा नेता नेपाल पक्षका चार मन्त्री हुनेछन् भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका दुई मन्त्री हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्वमाओवादी समूहबाट समेत मन्त्री थप्ने तयारी गरेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर नैतिक संकट सृजना भएको छ’
शेर बहादुर देउवालाई दुई दिन भित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी
सर्वोच्च अदालतद्वारा दोस्रोपटक संसद पुन:स्थापना भयो ,ओलीले गरेको संसद विघटन निर्णय बदर
एमाले नेताद्वारा उपचाररत आफन्तको मृत्यु भएपछी स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटे,देउवाद्वारा कारवाहीको माग
उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाइ- केके गर्न पाइन्छ ? केके पाइदैंन ?
२५६५ औं बुद्ध जयन्तीको शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने-‘बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हो,पाठ्यक्रममा सच्याउनुस’